Enweghị Googling ọzọ ... mana ị nwere ike Yahoo! | Martech Zone
Enweghị Googling ling mana ị nwere ike Yahoo!
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 20, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
The Oge Seattle na-akọ na Google na-aga mgbe folks tinye n'ọrụ ngwaa ha n'efu. Onye njem ala ahia choputara nnukwu blog post site na Yahooer nke na-ekwu… ị gaghị enwe ike Google mana nweere onwe gị na Yahoo!
N'otu ibugharị ngagharị, Yahoo! adịla mma ma Google aghọwo ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ. Emere m ụfọdụ nyocha ma ahụbeghị m okwu site na Google na ihe kpatara ha ji họrọ ime ihe a. Odi m ka o bu ezigbo ahia ahia… iwebata ngwaa ohuru uwa nke nwere aha ahia gi na ya, i gha eme mkpesa? Ọzọ ihe ị maara na music ụlọ ọrụ ga-aghọ jerks na ga-amalite ịgba akwụkwọ folks n'elu ekere òkè oké music! (Oh chere…)
M wee gaa Google n'isi ụlọ ọrụ mgbe na a azụmahịa njem afọ gara aga. Anọ m na-atụ egwu nke ogige, ndị scooters, kichin, oche ịhịa aka n'ahụ, wdg. Fewfọdụ echiche gafere n'isi m… wow, jụụ, ebe a nwere oke ego, ndị a nwere ike iji koodu ejiji! Ma ugbu a, ọ dị ka 'ụlọ ọrụ' ahụ ugbu a na klas. Otu ngosipụta nke a bụ mgbe Clọ Cambrian na-amalite site na ụlọ akwụkwọ mgbe ọ gbalịsịrị iji pizzas otu puku nye Google nri.
Maka ụlọ ọrụ ndị nwere ihe ịga nke ọma na-adabere na ahịa ịre ahịa, ọ na-eju m anya na mgbe ohere bilitere igosi n'ezie 'dị jụụ' ha kwuru na ha bụ, ha na-eme nzuzu. Best Buy mere afọ gara aga mgbe Improv Ebe nile nwere narị mmadụ abụọ gosipụtara na-ele anya dị ka ndị ọrụ Best Buy na ha mechara nwee nsogbu, ndị uwe ojii kpọrọ, e wee nye ha buut.
N'okpuru ala, ọ bụrụ na ị ga-agwa ndị mmadụ na ị dị ọhụrụ, hip, dị jụụ, bọmbụ ahụ, sie ike, wdg. Google rutere ogo 10 na igwe oyi oyi m.
Ezigbo Mr. Google,
Biko ewepụla gmail m, agụ, nchịkọta, nkewa api, ọgbakọ mkparịta ụka, ma ọ bụ akaụntụ google peeji nke. A ka m eche na ị dị mma. Naanị as oyi.
Yahoo! kwesiri iji ohere a. You na-yahooing?
Ọ bụghị mmejọ ha, ọ bụ nke gị
Aug 21, 2006 na 4:16 PM
Google nwere ichedo aha ya ma ọ bụ na ọ ga-atụfu nwebisiinka ya na saịtị porn ọ bụla nwere ike iji okwu ahụ dọta okporo ụzọ. N'ezie Yahoo chọrọ ka ị Yahoo! dị ka ngwaa. Cheta mgbasa ozi TV ha nke jụrụ “You Yahoo !?” O di nwute, onweghi onye mere Yahoo. Mana na-enweghị mgbasa ozi ọ bụla, ndị mmadụ malitere Googling. Kedu otu esi egbochi Yahoo! Nweghị ike ịkpọsa ma ọ bụ rịọ maka oyi, nke bụ ihe na-eme gị ngwa ngwa.
Okwu Cambrian House gosipụtara Google Akụkụ gbara ọchịchịrị: Ọ bụ ihe nzuzo. Onye obula onye na-azọ ụkwụ na akụrụngwa Google na - akpọghị ya. Ewepụla m. Ọ bụ ihe ọchị.
Aug 21, 2006 na 6:07 PM
Aga m ekwenye na gi gbasara Google kwesiri ichebe o nwebisiinka; agbanyeghị, ọ na-atọ m ụtọ na ụlọ ọrụ anaghị eme mkpesa ruo mgbe ego na-aga. Google anaghị eme mkpesa dị ka mmalite mgbe folks malitere iji okwu ahụ bụ 'googling'; o yikarịrị ka agụụ na-agụ ha maka nlebara anya. Agbanyeghị, ugbu a ha nwere ikike ị nweta ngalaba ọrụ iwu, ọ dị ka ọ bụ eziokwu ugbu a ha ga-agba mbọ chekwaba aha ọma ha.
Nke a yiri ụlọ ọrụ ndekọ. Mgbe ị bụ onye agbaji egwu, ị na-arịọ ndị mmadụ ka ha gee ntị… mgbe ị bụ ọtụtụ nde mmadụ, ị ga-eso RIAA soro gị malite ịgba akwụkwọ.